Reflex Labs Kutanga Muscle Stack
63 Reviews Kubva paongororo dze 63
Reflex Labs Yakawedzera Muscle Stack
56 Reviews Kubva paongororo dze 56
Reflex Labs yepakati Musuru Stack
48 Reviews Kubva paongororo dze 48
Reflex Labs Kuchengeta Stack
Iwo Akanakisa maSARM Stack yeKickstart Yako Shanduko
Mikana ndeyekuti, iwe unoda kuita zvese zvaunogona kuti uwane zvinangwa zvako zvekurovedza muviri uye uwane hupenyu hwakanaka. Izvi zvinoreva kudya, kurara, uye kudzidzira kune zvawanikwa zvaunoda.
Paunenge uchitsvaga kushandura muviri wako kuita mhasuru-yekuvaka muchina, iwe unoda yepamusoro-mhando shanduko stack. NeTransformation Stacks kubva kuSARMs Chitoro, unogona kudzikisa mafuta emuviri, kuwedzera pahukuru uye simba, uye unzwe wakanaka zuva nezuva.
Chii Chinonzi Shanduko Matura?
Shanduko masheya ndiwo mapoka ezvekuwedzera zvakagadzirirwa kukubatsira iwe mukubudirira shanduko. Vanozobatsira muviri wako kuti upinde mune yepamusoro mamiriro nekubatsira mune tsandanyama kuwana uye kurasikirwa kwemafuta Nzvimbo dzedu dzekushandura dzinosanganisira maSARM akadai saAndarine, Ostarine, Ligandrol, Testolone, Cardarine, Ibutamoren, Yohimbine, nezvimwe.
MaSARM Anoshanda Sei
Senzira yakachengeteka uye yepamutemo kune steroid yekuvaka mhasuru, maSARM anenge asina mhedzisiro uye anopa mhedzisiro yakanaka. MaSARM anomiririra "inosarudza uyerogen receptor modulator." Izvi zvinoreva kuti maSARM anosarudza anosunga kune iyo androgen receptors mumhasuru dzako nemapfupa pane kusunga kune vasingadiwe zvinogamuchirwa sevhudzi nemeso. Kutenda kune yakasarudzika inosunga, maSARM anowedzera anobatsira kuwedzera kupora kwako uye kuita.
Iwe unozoshandisa yako yekushandura stack kwemavhiki angasvika mana kusvika gumi nemaviri, zvinoenderana nesaizi yako, murume kana murume, uye zvinangwa zvekudzidzira. Ne maSARM, unogona kunyatso chengeta zvaunowana mushure mekupedza yako kutenderera (chero iwe uchiramba uchidya, kurara, uye kudzidziswa kwekuchengetedza!)
Kuchinja Kwakaita Matura Akasiyana Sei Nezvedu Zvimwe Zvigadzirwa
KuSARMs Shop, tinopa akasiyana ekuwedzera uye masaga ekurasikirwa kwemafuta, mhasuru kuwana, uye shanduko. Vanosiyana sei?
Chekutanga pane zvese, maSARM akati wandei anoshandiswa kuzadzisa zvido zvakasiyana. Vamwe vari nani pakubatsira vanhu mukurasikirwa nemafuta (seStenabolic SR-9009) nepo vamwe vakanaka pakuvaka mhasuru yemhasuru (funga Ostarine MK-2866). Iwe unogona kusarudza kutarisisa pane chimwe chete chezvinodiwa izvi, kana ungangoda kuzviita kamwechete - uye ndipo panopinda mashanduko eshanduko!
Uye chechipiri, matanda e2 kusvika ku4 ekuwedzera anowedzera kuedza kwako kunyangwe kupfuura kutora imwechete yekuwedzera. Izvo zvinowedzerwa mukati mekushandurwa kwemaki zvinoshanda pamwechete kuwedzera mibairo yako uye kukubatsira iwe kuchengetedza zvaunowana.
Maitiro Ekuwana Yakanakisa SARMs Stack yeZvaunoda
SARM yega yega inoita basa rakatosiyana kuti iwe ugone kusarudza stack zvichienderana nekuti unoda kushandura sei muviri wako - kunyangwe iwe uri wakanyanya kutema pakucheka mashoma ekupedzisira mapaundi akasindimara emafuta, kana kuti uri kutsvaga kuwedzera yako mhasuru kuwana zvechokwadi. Heano edu gwara kune izvo zvivakwa uye hunhu hweakasiyana maSARM.
Isu tinopa anotanga masheya, epakati masaga, uye epamberi masaga zvichienderana nekuti mangani akasiyana akasiyana ekuwedzera iwe aunoda kutora kamwechete.
Chero chero Shanduko Yekutenderera yaunosarudza, ita shuwa yekutevera rairo yekushandisa kwayo! Usapfuure muyero wakaringana, uye ita shuwa yekuisa chinowedzerwa muhutano, hunoshanda hupenyu paunenge uchiwana yakawanda yekurara. Mhedzisiro yacho ichave yakakosha!